कांग्रेसका १० मन्त्री, काे कहाँबाट र के जिम्मेवारी ? - HAMRO YATRA
कांग्रेसका १० मन्त्री, काे कहाँबाट र के जिम्मेवारी ?
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बुधवार मन्त्री बनेका १० जनाले सपथग्रहण गरिसकेका छन् । एकजना मोहन बस्नेतबाहेक अरु सबै ९ जनाका लागि मन्त्री पद नयाँ र पहिलो अनुभव हो ।